Ụbọchị My Pet » Jụ ibelata mbụ AFỌ
emelitere ikpeazụ: Dec. 04 2020 | < 1
Mbụ AFỌ Ị ga-N'ezie chọrọ ịga On
-Ewu ụfọdụ fun na-echeta na anyị uzo ozo ka ndị stereotypical nri abalị na a nkiri.
Game Night: Fun na otu iko mmanya ma ọ bụ abụọ. Ịtụ a Pizza, igwu si ochie akwụkwọ osisi egwuregwu gị na nwata (na-eche Ọrụ, Twister, Amụma Ònye?) na ị ga-ahụ otú ihe fun na ị nwere!
Enwetaghị A gig: Live music ewe nrụgide anya a ntakịrị. Ị nwere ike ikori pụọ n'elu a ọṅụṅụ ma ga-enweghị jupụta dum ụbọchị na-aga n'ihu na mkparịta ụka.
N'ogige ụmụ anụmanụ / akwarium: E nwere ihe nke ukwuu ịhụ na ekwu okwu banyere. Ọzọkwa, ma ọ bụrụ na ị na-a obere na-eme ihere, na-ekiri ụmụ anụmanụ bụ oké ụzọ tichapụnụ mbụ ụbọchị adịghị eru ha ala – karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-na ozodimgba Herọd.
Adventure Ihe: Nsogbu onwe unu na-eme dị ka zip lining, segways na nkume rịa. A fun ụbọchị a na a otutu otu ọrụ.
Chapụrụ achapụ picnic: Ọ bụ a bit nke a cliché ma na nke ahụ bụ n'ihi na ọ bụ fun, ihunanya na nkịtị n'otu oge. Họrọ a mara mma ntụpọ; ma mee ka ọkacha mmasị gị nri na a kalama bubbly - ihunanya na ọnụ!
Gbasaa dịwara: Onye ọ bụla na-eche na ihe na-eme n'ihi na ọkara ụbọchị. Otú a ị na ma chọpụta ihe banyere onye ọ bụla ọzọ dị ka nke ọma dị ka mix ihe elu a bit!
Chọta gị Ụbọchị